Ungayikhetha kanjani isikulufa se-drywall
Izitadi ze-DRYWALL seziye zaba ngumlingo futhi zinde kancane empilweni yethu yansuku zonke. Bekade zisetshenziswa ekwakheni izindlu ezisezingeni eliphakeme nokwakhiwa kobunjiniyela, kepha manje futhi zingenye zezinto zokwakha ezisetshenziswa kakhulu, ngokwesibonelo, kufanele silungise into ...
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, imigqa ehlanganisiwe eminyakeni yamuva inokuthuthuka okusha, umugqa ohlanganisiwe ukuvela kohlelo lokuthola kabusha imfucuza, nakweminye imigqa yokukhiqiza. Isithando somlilo esine-tube ekhazimulayo ngokushisa okungaqondile ...
Inqubo Yokukhiqiza Yezipikili
Inqubo yokukhiqizwa kwe-Nail idweba ikakhulu, isihloko esibandayo, ukupholisha nezinye izinqubo. Izinto zokukhiqiza izipikili kungu-disc, okungukuthi, idiski yensimbi, ngemuva kokudweba ucingo, khipha ububanzi beNail Rod, bese ngemuva kwesihloko esibandayo, isipikili ...
Inqubo Yokukhiqiza Intambo Yensimbi
Inqubo Yokukhiqizwa Kwensimbi Yensimbi: I-Galvanizing iron wire ingenye yezigaba eziningi zensimbi yensimbi, ebizwa nangokuthi ucingo olubandayo lwe-galvanizing, i-GI wire, ucingo olubophezelayo, uhlelo lwayo lubanzi kakhulu, luhlanganiswe (luthando olubandayo) lwensimbi w ...
Nail Common Nail Nail Umehluko
Isipikili esijwayelekile nensimbi umehluko omkhulu kakhulu usekusetshenzisweni komehluko. Izipikili ezijwayelekile zivame ukusetshenziselwa izingxenye zokhuni zokuxhuma, yenziwa nge-General low-carbon steel, ukucutshungulwa okulula, izindleko eziphansi. Izinto zensimbi zenzipho ...